dimanche, 15 mars 2020 18:54
Fanodinkodinana « concombres de mer »: Olona 5 naiditra am-ponja, ka mpiasam-panjakana ny 4 ary teratany Sinoa ny iray
Naiditra am-ponja vonjimaika ny 5 amin'ireo 11 voarohirohy tamin'ny raharaha fanodinkodinana hazan-dranomasina efa nogiazana.
Ny andron'ny 06 martsa 2020 no tra-tehaky ny Zandary avy ao amin'ny Tobin-janamparitry ny Zandarimariam-pirenena ao Ambohimiadana, teny Ampanotokana (RN4), ny fiara Sprinter iray nitondra dingadingana (concombre de mer) tsy ara-dalàna, efa nohamainina miisa 66 gony.
Entana tsy ara-dalàna efa nogiazana tany Maromandia, Distrika Analalava Faritra Sofia izy ireo, saingy nahodinkodin'ireo tomponandraikitry ny fanaraha-mason'ny Jono tany an-toerana.
dimanche, 15 mars 2020 18:42
Crise de coronavirus: Réunion d'urgence entre le Ministre Joël Randriamandranto et les professionnels du tourisme
Le secteur tourisme est touché de plein fouet par cette crise de coronavirus. Le secteur tourisme enregistre déjà plusieurs annulations. Une réunion d'urgence a été faite entre le Ministre des transports, du tourisme et de la Météorologie, Joël Randriamandranto et son staff et la Confédération du tourisme de Madagascar (CTM), les présidents de groupements et l'office national du tourisme de Madagascar (ONTM) pour chercher des solutions pour y faire face et pour préparer l'après crise.
Sambava: Tanora zanaky ny Fiangonana tratra nangalatra moto Honda 125
Fotoam-bavaka no natao ary tamin'ny ora firavana dia mbola nijanona isan’ireo nanisa rakitra ny tompon’ilay moto. Rehefa nivoaka ny fiangonana ity farany dia akory ny hatairana fa nanjavona ilay moto Honda 125 miloko mena.
Vao nandre ny zava-nitranga dia nifanome tanana avy hatrany ny tanoran’ny fiangonana hikaroka. « Nisy tovolahy hitanay nanosika izay moto izay teo fa heverinay ho nirahina hanakisaka azy ka tsy nisy nanampo », hoy ny nahita.
Raikitra ny tsongo-dia, natao ny fikarohana ka hita tao Ambatofitatra Ambany eto Sambava ilay tovolahy nisy nahita fa nanosika ilay moto, ary efa teo ampandravana azy izy no tra-tehaky ny mpiara-miangona ...ka tsy nahateny.
Noraisina avy hatrany ary nentina niverina tany am-piangonana ilay tovolahy manodidina eo amin'ny 15 taona.
Efa naverina amin'ny tompony ny moto.
dimanche, 15 mars 2020 17:26
Antenimieram-pirenena: Hifarana ny alatsinainy 16 marsa ny fivoriana tsy ara-potoana
Nisokatra ny 4 marsa 2020 ny fivoriana tsy ara-potoana ny Parlemanta dia ny Antenimieram-pirenena sy ny Antenimierandoholona, ary tsy mihoatra ny 12 andro, natao indrindra hankatoavana ireo hitsivolana miisa sivy noraisin’ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina nandritra ny fotoana tsy mbola nampisy solombavam-bahoaka mandrafitra ny Antenimieram-pirenena teo anelanelan’ny febroary 2019 sy jolay 2019.
Hifarana ny alatsinainy 16 marsa 2020 amin’ny 11 ora atoandro io fivoriana tsy ara-potoana io ho an’ny Antenimieram-pirenena.
dimanche, 15 mars 2020 17:25
Coronavirus Philippine: Nasiana elanelana 1m tany am-piangonana
Ho fiarovana amin'ny valan'aretina Coronavirus, dia nandray fepetra ny fitondrana any Philippine fa asiana elanelana 1 metatra ao am-piangonana, toy izany koa rehefa handray Eokaristia sy rehefa hivoaka ny Fiangonana.
(Loharanom-baovao Katolika miray fo - Madov Fiacre Vazison)
dimanche, 15 mars 2020 16:47
Lalam-pirenena faha-7: Sprinter manao zotra Antananarivo-Toliara, nivadika
Lalana malama noho ny erik’andro, ny fiara ihany koa efa nisy olana teny am-piaingana teny amin’ny toby fiantsonana Fasankarana no voalaza fa nitarika ny loza. Fiara mpitatitra olona, Sprinter manao zotra Antananarivo-Toliara no nitsikasina teo antsisin-dalana io maraina io, raha niditra fiolahana, tamin’ny lalam-pirenena faha-7, sahabo ho 30km tsy hidirana an’i Fianarantsoa.
Tsy nisy aina nafoy, ireo naratra kosa nalefa tsaboina ao amin’ny hopitaliben’i Fianarantsoa.
dimanche, 15 mars 2020 16:38
Coronavirus COVID-19: Fepetra hiarovana ny fahasalaman’ny Malagasy nambaran’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina
Mbola « Stade 0 » no misy an’i Madagasikara, tsy mbola misy tranga « Coronavirus » eto, hoy ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, omaly, nandritra ny lahateny nataony ho an’ny Malagasy mikasika ilay Coronavirus izay mihanaka maneran-tany.
Nisy ny fepetra noraisin’ny fanjakana, nambarany, taorian’ny namoriany ireo manampahazaina avy amin’ny Akademia siantifika hiarovana ny fahasalaman’ny Malagasy.
1- Haato mandritra ny 30 andro ny sidina rehetra mampitohy an'i Madagasikara sy ny firenena ao Eoropa
2- Haato ny sidina mampitohy an'i Madagasikara sy La Réunion ary Mayotte;
3- Omena hatramin'ny Alakamisy 19 marsa ireo olona monina sy miasa eto Madagasikara, ny teratany Malagasy mamita iraka na mitsabo tena any ivelany, hahafahany mody;
Tanterahina eny amin’ny Boulodrome MAMA Imerintsiatosika – Arivonimamo omaly sy anio alahady 15 marsa 2020 ny fifaninanana iadiana ny Amboaran’i Madagasikara.
Sokajy telo no ifaninanana, dia ny olontelo miaraka lahy sy vavy, ary sokajy olondroa « vétéran ».
dimanche, 15 mars 2020 10:26
Rivodoza HEROLD: Nitombo hery ka lasa "Forte Tempête Tropicale"
Tany amin’ny 152 Km Atsimo Atsinanan’Antalaha no nisy ny foibeny tamin’ny 07 ora marain’ity alahady 15 marsa 2020 ity.
Mety mbola hiakatra ny renirano sy ny fiandronan’ny rotsak’orana.
Iangaviana mba tsy hiandriaka intsony ny mpampiasa ranomasina eo anelanelan’ny Antsiranana sy Brickaville satria ratsy ny andro araka ny fanentanana ataon’ny avy eo amin’ny sampana mpamantatra ny toetr’andro.